I-Garden Villa, e-Livingstone - I-Airbnb
I-Garden Villa, e-Livingstone
Livingstone, Southern Province, i-Zambia
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Raval
U-Raval Ungumbungazi ovelele
Indlu ebanzi, enamakamelo ama-3 phakathi kweLivingstone. Indawo engaphandle emangalisayo enengadi enkulu, evuthiwe, i-swimming pool kanye nendawo yokuzijabulisa ene-bar, izinketho zezihlalo ezahlukene kanye nesitendi esikhulu se-braai (bbq). Ukuhamba ibanga ukuya edolobheni kanye nedrayivu emfushane eya eVictoria Falls edumile.
Jabulela ukunethezeka kwendlu yangasese ngokuphelele ngesikhathi uhlala e-Livingstone. Indlu inamakamelo okulala amakhulu ama-3 (i-ensuite eyi-1), ikhishi lepulani elivulekile (elifakwe ngokuphelele) nendawo yokudlela, indawo yokuphumula ebheke ichibi nengadi, i-TV yesathelayithi, i-Wi-Fi kanye ne-aircon kuyo yonke indawo. Indlu inhle futhi indawo engaphandle ingcono kakhulu! Inala yesikhala nethuba lokujabulela izinsuku ezifudumele, ezinelanga uLivingstone azokunikeza, uphumule ngasechibini, ukuxuba isiphuzo endaweni yokucima ukoma noma ukujabulela ingadi eluhlaza. Itholakala endaweni ephephile yase-Livingstone (yonke i-Livingstone iphephile!) futhi inokufinyelela kalula kuwo womabili idolobha lase-Livingstone, okuwuhambo olufushane noma olufushane ngemoto nokuhamba imizuzu eyi-10 ukuya e-Victoria Falls.
Indlu isingathwe ngu-Raval ongasiza nganoma yini oyidingayo ngesikhathi uhlala e-Livingstone. Kukhona no-Irene omangalisayo ongumsizi wethu wasendlini futhi ozokugcina izinto zihlanzekile futhi zicocekile kuwe, angakwazi futhi ukukusiza ngokuwasha nokuwasha uma eceliwe. Kukhona noDonald ogcina ingadi ibukeka iyinhle kakhulu, uyakujabulela futhi ukukusiza ngezinto ezengeziwe ezifana nokuthola amalahle ebraai (bbq). Kukhona nonogada wasebusuku.
Indlu itholakala kuLikute way, umgwaqo oyisihlabathi othule phakathi nedolobha laseLivingstone. Indawo inokuthula futhi ingadi igcwele izinyoni ezinhle. Indlu iyidrayivu emfushane (noma uhamba ngezinyawo) ungene eLivingstone kanye nemizuzu eyi-10 ukuya eVictoria Falls. Abahlinzeki abaningi bomsebenzi bazolanda endlini ngaphandle kwenkokhiso eyengeziwe.
Izivakashi zethu zinikezwa indawo yokwenza izinto zazo futhi ziphumule noma zibe matasa ngendlela ezifisa ngayo. U-Sarah uzohlangana nawe lapho ufika ukuze akusize akuhlole, adlule endlini kanye nanoma yiluphi olunye ulwazi ongase uludinge ngendawo. Ngemva kwalokho uyatholakala nganoma isiphi isikhathi esihleliwe futhi njalo nje ungekho ucingo.
Izivakashi zethu zinikezwa indawo yokwenza izinto zazo futhi ziphumule noma zibe matasa ngendlela ezifisa ngayo. U-Sarah uzohlangana nawe lapho ufika ukuze akusize akuhlole, adlule…
URaval Ungumbungazi ovelele